I-China Spray Polyurea Elastomer (SPUA) abavelisi kunye nabathengisi | UDehua
I-polyurea elastomer yokutshiza (i-SPUA) yitekhnoloji yokwakha okusingqongileyo ukuhlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo.Ikhawuleze yadityaniswa neentlobo ezimbini zolwelo, A no-B, phantsi koxinzelelo oluphezulu ngezixhobo ezikhethekileyo zokutshiza ukufezekisa ukubumba okukhawulezayo.
Umxholo oqinileyo we-100%, ubume bendalo kwaye akukho zinyibilikisi eziguqukayo.
Luhlala ixesha elide nokumelana umhlwa, ngcono zu, 3PE kunye epoxy njl
Ukusebenza ngokugqwesileyo okungangenwa ngamanzi, kubhetele kunezinto ezibhijelweyo.
Ukusebenza okuphezulu, iseti yezixhobo zokutshiza zinokuqhubeka ukutshiza ngaphezulu kwe-1000 yeemitha zesikwere ngosuku.
Ukuxhathisa ngokufanelekileyo ukunxiba kunye nokubeka enye yezona zinto zinxitywayo zerabha.
I-DH101, uthotho lwe-aliphatic elastiki ye-SPUA inokugcinwa okugqwesileyo kombala, ayizukutshintsha umbala emva kokuveza elangeni ixesha elide, eyahluke ngokupheleleyo kwi-SPUA enuka kamnandi. Isetyenziswa ikakhulu ekukhuseleni umphezulu we-SPUA engenamanzi okanye umphezulu we iimveliso zemibala elula.
I-DH102, uthotho lwe-aliphatic engqongqo ye-SPUA inokugcina umbala okugqwesileyo, ayizukutshintsha umbala emva kokuveza elangeni ixesha elide, i-differnet ngokupheleleyo kwi-SPUA enuka kamnandi, Isetyenziswa ikakhulu ekukhuseleni umphezulu we-SPUA anticorrosion, umphezulu iimveliso zombala ezikhanyayo, okanye umphezulu we-anticorrosion weemveliso zentsimbi ezitshize nge-SPUA enuka kamnandi.
Egqithileyo izinto ezisebenza ngokukhawuleza zokutshiza zenziwe ngephepha leplurea